Aljazeera iyo Maakroon wareysigii qaboobaa! [Warbixin].
Sunday November 01, 2020 - 16:56:24 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Telefeshinka caanka ah ee Aljazeera ayaa xalay waraysi ka qaadday madaxweynaha Faransiiska ninka lagu magacaabo Emmanuel Macron.
Wareysigan oo loo qaaday qaab dhaliilo badan leh ayaa wuxuu maakroon ku sheegay in uuna taageersanayn falalka sawir-gacmeedyada balse haddana uu ilaalinayo xorriyadda hadalka taas oo ka dhigan bakhtiga ma cuno fuudkiisanawaan cabbaa.
Wuxuu sidoo kale sii raaciyay in aan la aqbali karin in arrinka looga jawaabo qaab rabshado wata. Hadalladiisa iska hor imanaya waxa kamid ahaa in la leexiyey hadalkii maalin hore ka soo yeedhay.
Mar wax laga weydiiyay xayiraadda xagga badeecadaha ee ay muslimiintu saareen dawladdiisa waxa uu ku jawaabey in ay tahay mid aan laa’iq ahayn. Markalesi uu dadka maangaabka ah u beerlaxawsado waxa uu yidhi "Faransiisku waa dawladdii u horreysay ee kitaabka quraanka ah turjunta" haddana waxa uu yidhi "waxana aanu dhisnay masaajid weyn!".
Haddaba waxa isweydiin mudan kooxda Aljazeera haysataa iyo wareysigoodu ma ahaa mid ka turjumayay dareenka Muslimiinta?.
Wixii loogu yeedhi jirey dagaalkii 2aad ee adduunku markii uu dhammaaday ayaa waxa dunida ka curtay laba awoodood oo iska horjeeda, bahdii soofiyeetka ee WARSO iyo dhinicii xulafada NATO oo uu hoggaaminayo Mareykanku. Kolkaa waxa shir qabsaday Jamaal Cabdinaasir oo ahaa hoggaamiyihii masar, Jawharal Nehru hogaamiyihii Hindiya iyo Marshal Joseph oo ahaa hogaamiyihii Yuguslaafiya oo iska dhigayey in ay dhexdhexaad yihiin laakiin ay danaysi siyaasadeed ka ahayd. Hadda kooxda Aljazeera wareysigoodu wuxuu u muuqdaa in ay rabaan xaqqa iyo baadilka in ay dhexdhexaad ka noqdaan si ay u qaataan magaca ilbax oo ah mid lagu siro muslimka.
Waxa kale oo in la fahmo ah, marka horeba wareysigu wuxuu ku baxayey af faransiis la turjumey waxaana dhici karta in qaabka madaxweynaha wax loo weydiiyey ay sidan ka sii qaboobeyd.
Sabankii yimaaddaba ragbaa sahayda naaneys, haddaba Waraysiga ay qaadeen waxa loo turjuman karaa ama uu yahayba mid loogu xaglinayo faransiiska islamarkaana loogu gogol xaadhayo in xayiraadda laga qaado waxsoosaarkooda.
Qaadacaadii ay bulshada caalamka islaamka si iskood ah ugusoo rogeen badeecadaha Faransiiska ayaa dhalisay saameyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo aad uxooggan arrinkaasina wuxuu ka cadhaysiiyay Macron iyo xukuumaddiisa wuxuuna go'aansaday in uu ka dabaasho dhibkaas markaas ayuu dowladda Qadar ka codsaday in ay minbar kasiiso Jaziira.
Waxyaabaha uu ku dhuumanayey Maakroon waxa kamid ahayd bilawgii casrigii iftiinka oo uu ula jeedo soo ifbaxa calmaaniyadda la ixtiraamayay xorriyadda hadalka.
Markii Al Jaziira laga baahiyay wareysiga madaxweynaha Faransiiska ayay shabaabka muslimiinta baraha bulshada aad ugu dhaliileen wariyihii wareysiga qaaday kuna tilmaamay nin aad uliita.
Ducaadda iyo saxafiyiin ayaa muslimiinta ugu baaqay in ay sii wadaan dhaq dhaqaaqyada ay ku qaadacayaan badeecadaha Faransiiska ayna iska dhega tiraan hadalka sasabashada ah ee Macron kasoo yeeray.
Haba yaraartee hoggaamiyaha Faransiiska ma muujin in uu ka laabtay mowqifkiisi hore marka laga reebo in uu umuuqday nin guuldarraystay oo ka carooday jawaab celinta adag ee uga timid umadda milyaarka.
W/Q Wadaadyare Xaashi
Tigreega oo si adag udifaacanaya magaalooyin muhiim ah, iyo Abiy Axmed oo Hanjabaad culus jeediyay [Warbixin].
Dhaq dhaqaaqyo Maleeshiyaad hubaysan ah oo ka bilaawday Mareykanka [Warbixin].
Maakroon maxaa ku kallifey in uu Carabi wax ku qoro? W/Q: Wadaadyare.
Carona Virus oo wali halaag ka geysanaya daafaha caalamka [Warbixin].